September | 2010 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
လောကုတ္တရာအသိပညာ .. ..အဆက်
Posted on September 30, 2010 by chitnge
လောကုတ္တရာအသိပညာ .. ..အဆက် ***** အဆိုးရှုဝါဒမဟုတ်သောဗုဒ္ဒဘာသာ သူတို့က ပိုင်လည်း ပိုင်ချင်တယ်၊ မြဲလည်း မြဲချင်တယ်၊ ချမ်းလည်း ချမ်းသာချင်တယ် .. .. ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က တစ်ခါလာလည်း မမြဲဘူး၊ တစ်ခါလာလည်း ဆင်းရဲတယ်၊ တစ်ခါလာလည်း ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတော့ အဆိုးရှုလွန်းတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့က အဆိုးရှုလို့ စွပ်စွဲတယ်။ အဲဒါလည်း မှားနေတယ်။ သူတို့စကား ကတော့ (Pessimistic outlook) တဲ့ အဆိုးရှုဝါဒကြီးလားလို့ သူတို့က စပ်စွဲကြတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ ဖြေရှင်းပါတယ်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, အတ္တ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
လောကုတ္တရာအသိပညာ .. .. အဆက်
လောကုတ္တရာအသိပညာ .. ..အဆက် သူတို့က စကြ၀ဠာအကြောင်းကိုပဲ လေ့လာတာကိုး။ ဒီတော့ စကြ၀ဠာအကြောင်း၊ တွင်းမဲကြီးတွေ (Black Holes)တို့ နောက် သူတို့ကြေငြာတဲ့ (Origin of the universe) စကြ၀ဠာ စဖြစ်တာတို့ (Singularity) အမှတ်ထူးတို့ တော်တော်လေးသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ ဒီလောကမှ လွန်မြောက်တဲ့ အသိပညာကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော် ကိုမှ ပူဇော်ချဉ်းကပ်မှု မပြုလို့ရှိရင်တော့ သူတို့ဟာ အသိပညာရဲ့ အထွတ်အထိပ်ကို မရနိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့က သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ****** ခုန်ကျော်မှုများ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
လောကုတ္တရာအသိပညာ .. ..
Posted on September 28, 2010 by chitnge
လောကုတ္တရာအသိပညာ .. .. ယောဂီများ .. .. အသိပညာကို လူတွေက ရှာဖွေကြတယ်၊ လူသားအားလုံးပဲ ဆိုပါတော့။ လူ့သမိုင်းကြီးနဲ့ အတူတူ အသိပညာကို ရှာကြတယ်။ “လူဆိုတာ အမှန်တရားသိမှ ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်” ဒီလိုပဲ ခံယူကြတယ်။ အသိပညာကို ရှာတဲ့နေရာမှာ ၁) တိုက်ရိုက်အသိ (Direct Knowledge) ၂)တစ်ဆင့်ခံအသိ (Indirect Knowledge) လို့ တစ်ချို့က ဒီလိုပိုင်းခြားပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အသိ ဆိုတာကတော့ အာရုံငါးပါးကနေ ပြင်ပလောကကို သိတာပါ။ တစ်ဆင့်ခံ အသိဆိုတာကတော့ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, အတ္တ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
Posted on September 27, 2010 by chitnge
စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် … ယခု ဆရာကြီးဒေါက်တာချစ်ငယ် (ဒဿန) ရေးသားသော “ကျွန်ုပ်လေ့လာမိသော ဇော်ဂျီဖိုဝင်သားနှင့် သိပ္ပံပညာ” စာအုပ်ကို မြန်မာတပြည်လုံးသို့ ဖြန့်ချိလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် စာအုပ်ဆိုင်ကြီးများတွင် ၀ယ်ယူရရှိ နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။ Admin. No tags for this post.
“Seik” is different to “Nyan”
Posted on September 23, 2010 by chitnge
“Seik” is different to “Nyan” “Seik” is “Thin-Kha-Ta”. “Nyan” is “Ah-Thin-Kha-Ta”. “Seik” is to be deleted. “Nyan” is to be constructed. “Seik” is concerning worldly affairs. “Nyan” is concerning knowledge of the world beyond at least. “Seik” is not purified … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Nibbana	| Leaveacomment
The Method of Constructing Objective Knowledge ….
Posted on September 18, 2010 by chitnge
The Method of Constructing Objective Knowledge …. Science does not satisfy with subjective knowledge. So they try to have objective knowledge by using apparatus. So, science can have the original facts of nature as it is. Even this in the … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Science	| Leaveacomment
Differences Between Scientific Knowledge and Buddhistic idea ….
Posted on September 17, 2010 by chitnge
Differences Between Scientific Knowledge and Buddhistic idea …. I want to say something about the differences between scientific knowledge and Buddhism. I hope most of the people understand about scientific method but I am afraid to that whether they understand … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Nibbana, Science	| Leaveacomment
Difference between Buddhism and Theology
Posted on September 15, 2010 by chitnge
Difference between Buddhism and Theology Before I am saying about Theology, I want to say something about Buddhism. Buddhism gives guiding principle to take practice Vippassana. When we take practice Vippassana, our mind becomes purified. Consequently, we have some power … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Nibbana	| Leaveacomment
Buddhism is not Theology ….
Posted on September 14, 2010 by chitnge
Buddhism is not Theology …. Human beings are taking interest in scientific knowledge, it is good. Science provides us all the utilities of human society. So, science is much popular in these days. On the other hand, science rejects theology. … Continue reading →
Posted on September 13, 2010 by chitnge
Two Kinds of Knowledge Here I want to say something about knowledge. There are two kinds which are the knowledge of the world and the knowledge of the world beyond. Knowledge of the world means concerning worldly affairs. Knowledge of … Continue reading →
Posted on September 12, 2010 by chitnge
အပျက်မြင် မဂ္ဂင် ယောဂီများ .. .. ဆရာမြတ်ကြီးက မိန့်မှာဘူးတယ် “၀ိပဿနာဟာ အမျိုးကောင်းသား အမျိုးသမီးတွေ ကျင့်သုံးဆောက်တည် အပ်တယ်” တဲ့ .. .. ဒီတော့ ကျင့်သုံးပါ အားပေးပါတယ်၊ အမျိုးကောင်းသား အမျိုးသမီးတွေ ကျင့်ရတဲ့တရားပဲ။ “ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ရင် တရားကျင့်ပါ” လို့လည်း မှာတယ် .. .. နိဗ္ဗာန်ကလည်းရှိတယ် သာသနာအတွင်းမှာပဲ ကိုယ်က အရိယာဖြစ်နိုင်နေတော့ ကြိုးစားရမှာ ကိုယ့်တာဝန်ပဲ။ ကြိုးစားခြင်းဟာ တန်ဆာဆင်တာပါ။ သာသနာအတွင်းဆိုတော့ အထူးပြောဖွယ်ရာ မလိုပါဘူး။ တစိုက်မတ်မတ်ကြိုးစား … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, ဆရာမြတ်ကြီး, နိဗ္ဗာန်, သာသနာ	| Leaveacomment
About Scientific Knowledge Everybody knows scientific knowledge is good for human society. Good means it is useful, applicable, beneficial and profitable. So, scientific knowledge offers mankind to develop their interest. It is true but when we study about knowledge, scientific … Continue reading →
The Real Hero or The Real Scientist …Stephen Hawking
Posted on September 10, 2010 by chitnge
The Real Hero or The Real Scientist …Stephen Hawking Hawking in his last book, the Grand Design announced that an intelligent creator was not necessary for the creation of the Universe, because physical laws are ready to arrange to … Continue reading →
Posted on September 9, 2010 by chitnge
ပဋိပတ္တိသာသနာထွန်းကားလာပြီ ယောဂီများ .. .. သစ္စာတရား လိုက်စားနေတာ သာဓုခေါ်ပါတယ် .. .. သာသနာအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက သစ္စာလိုက်ရင်းနဲ့ ထမ်းဆောင် နေတဲ့အတွက် အထူးသာဓုခေါ်စရာပါပဲ။ အခု ယောဂီများကလည်း တရားကို လိုက်နေကြပါပြီ၊ သာသနာကလည်း ပွင့်ပါပြီ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မျက်စိနားပွင့် သွားပြီ။ တစ်ပါးသူကို အလိုဆိုးနဲ့ လိမ်ညာလှည့်စားပြီး သတင်းမှားတွေ ထုတ်ပြန်တဲ့ မေတ္တာတံခွန်လို အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေရဲ့ စကားတွေလည်း မှားတယ်ဆိုတာ သိကုန်ကြပြီ။ အမှန်အကန် သတင်းများက ထွက်လာပြီ .. .. ဒီတော့ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, ဆရာမြတ်ကြီး, သာသနာ	| Leaveacomment
အမှန်တရား၏တန်ဖိုး မေတ္တာတံခွန်အဖွဲဟာ အလိုဆိုးနဲ့ သူတို့မုန်းတဲ့ လူတွေကို အဓမ္မ၀ါဒရှင်တွေအဖြစ် စွပ်စွဲပြီးနောက် – ရွှေပေလွှာတွေထုတ်၊ စာတန်းတွေထုတ်၊ ကြေညာစာတွေထုတ် အရမ်းထုတ်ခဲ့ကြတာ။ ဘယ်လောက်ထိ ထုတ်လည်းဆိုရင် ရိပ်သာတွေမှာတောင် ဖြန့်ဝေတာ .. .. အမှန်တရား ကျင့်တာဟာဟာ မြတ်စွာဘုရား ကြိုက်တယ်။ ဟုတ်တာတွေ၊ မှန်တာတွေ၊ အကျိုးရှိတာတွေ၊ ၀ိပဿနာ ကျင့်သုံးဆောက်တည်တာတွေ၊ နှလုံးသွင်းတာတွေ လုပ်ကြပါ .. .. ယောဂီများ .. .. အမှန်တရားဆိုတာ အဖိုးတန်ပါတယ်၊ တန်ဖိုးရှိပါတယ် .. .. အခု … Continue reading →